एपेन्डिसा, इटिस रोग भनेको के हो ? यस्ता हुन्छन् लक्षणहरु ? सबैले जानी राखौं – Ap Nepal
एजेन्सी । एपेन्डि साइटिस एउटा आकस्मिक अवस्था हो । यो रोगले समयमा उपचार पाएन भने मान्छेको ज्यानै जान पनि सक्छ । एपेन्डिक्स भन्ने अङ्ग सुन्निएको अवस्थामा एपेन्डिसाइटिस हुन्छ । कहिलेकाहीँ त फुटिसकेको पनि हुन सक्छ ।
१. दुखाइः नाइटोवरिपरिबाट शुरु भएको दुखाइ बिस्तारै दाहिने कम्मरको माथि सर्न थाल्छ ।२. उल्टी हुनुः एक वा दुईपटक उल्टी हुन सक्छ ।३. साधारणतया १०० डिग्री फरेनहाइटसम्मको साधारण ज्वरो देखिन्छ ।४. कहिलेकाहीँ पिसाबमा रगत देखिन पनि सक्छ ।५. कब्जियत, झाडापखाला अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।
Prevतासबाटै संसारको भवि’ ष्यवाणी गर्ने पहिलो महिला क्षेमता,जसले क्या, न्सर समेत निको पार्ने ग्या, रेन्टी लिइन (भिडियो सहित)
Nextबालगायक सचिन परियार र बिनिता कुमालबिचको पहिलो भेट,अन्तरवार्तामै लास्टै हसाए- हेर्नुस (भिडियो सहित )